Mushandi weApple Akawanikwa Akafa Mukamuri Yemusangano weApple Mahofisi | IPhone nhau
Mumwe mushandi weApple anowanikwa akafa mukamuri yemusangano yemahofisi eApple
Nezuro mangwanani pa8: 35 mangwanani Cupertino nguva, mushandi weApple akawanikwa akafa mukamuri yemusangano kubva kuApple's Cupertino nzvimbo, sekureva kwedzimwe nhepfenyuro, akabatwa angadai akasangana nepfuti.
Sajeni Andrea Ureña weHofisi yeSanta Clara County Sheriff, iyo inopa masevhisi emapurisa muCupertino, yakazivisa kufa kwemurume anoshanda sechiitiko chakazvimiririra uye icho chisingaise njodzi yeruzhinji inogona kukanganisa vamwe vashandi vezvivakwa.
Sheriff kuferefeta pa #Apple dzimbahwe muCupertino. Mutumbi wakawanikwa mune imwe imba yemusangano. pic.twitter.com/HC7UBPWROM
Sezvineiwo Sajeni Ureña vakafonerwa na8: 35 mangwanani kumhan'ara kufa kwemunhuPakati pechirevo ichi, akataura kuti parizvino hapana vafungira. Mushure mekuferefetwa kwekutanga, Ureña anosimbisa kuti parizvino havana kuwana humbowo hwekuti vanhu vazhinji vatora chikamu muchiitiko ichi uye zvinoita kunge chiitiko chega uye hapana mumwe wevashandi vezvivakwa zveCupertino atora kana ari panjodzi. Santa Clara County Coroner's Hofisi iri kuitisa ongororo yekuona chinokonzera rufu, sezvakataurwa naSajeni Ureña.
Nhare yekukurumidzira yakazivisa kuti murume wechirume akawanikwa aibuda ropa mumusoro pamwe kubva kumusoro kwepfuti. Maminetsi mashoma gare gare, vanochengetedza vakataura kuti mutumbi wanga uri mukamuri yemusangano uine pfuti. Panguva ino uye kudzamara kuferefetwa kwapera, hatigone kukupa rumwe ruzivo nezve chiitiko chinosuwisa ichi chakaitika kuzvivakwa zveApple muCupertino.
Ureña anoti haakwanise kusimbisa chero ruzivo rwakanangana nechikonzero cherufu kana kuti zvombo zvakawanikwa padyo nemutumbi. Chiitiko haina kuchinja mashandiro akajairwa eKampasi sezvo kuvapo kwemapurisa kwave kungogumira kune vashoma Sheriff nemotokari dzekonona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mumwe mushandi weApple anowanikwa akafa mukamuri yemusangano yemahofisi eApple
Wakambozviuraya here nekuti Apple zvikamu zviri kuderera?
Nintendo kusunungura mimwe mitambo gore rino
Maitiro ekugadzira ako maforodha kutenderera (Pasina Jailbreak)